Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5 Ny fanaovana izany hitranga
Na dia tsy miasa ao amin'ny orinasa lehibe iray teknolojia dizitaly ianao dia afaka mampandeha fanandramana. Azonao atao na ny hanao izany ny tenanao na ny mpiara-miasa amin'ny olona izay afaka manampy anao (ka iza no afaka manampy).
By io hevitra io, manantena aho fa faly ianao ny amin'ny mety ny manao fanandramana manokana nomerika. Raha miasa amin'ny orinasa lehibe iray ianao teknolojia mety efa ho manao fanandramana ireo amin'ny fotoana rehetra. Fa, raha tsy miasa any amin'ny orinasa teknolojia izay mety mieritreritra fa tsy afaka mihazakazaka dizitaly fanandramana. Soa ihany fa diso izany; amin'ny kely famoronana sy ny asa mafy, ny olona rehetra dia afaka mihazakazaka ny niomerika fanandramana.
Amin'ny maha-dingana voalohany, dia manampy ny manavaka fomba roa lehibe: manao izany ianao, na miara-miasa amin'ny ny mahery. Ary, misy na dia roa fomba samihafa izay afaka manao izany ny tenanao; afaka hanandrana eo amin'ny tontolo misy, anorenanareo ny fanandramana manokana, na hanao ny vokatra manokana ho an'ny fanandramana miverimberina. Aho ohatra ireo amin'ny fomba maro ny ohatra eto ambany, ary ianao raha mianatra momba azy ireo no voamarikao ny fomba fomba tsirairay dia manolotra ny varotra-offs miaraka lafiny efatra lehibe: vola, fanaraha-maso, realism, sy ny fitsipi-pitondrantena (Sary 4.11). Tsy misy fomba tsara indrindra no toe-javatra rehetra.
Sary 4.11: Famintinana ny varotra-offs ny fomba samihafa izay afaka manao ny fanandramana hitranga. By vidiny aho hoe lany ny mpikaroka eo amin'ny fotoana sy ny vola. By fanaraha-maso tiako holazaina ny fahaiza-manao izay tianao eo amin'ny mpandray anjara ny fiantsoana ho miaramila, randomization ary hanolotra fitsaboana, ary mirefy vokatra. By realism tiako holazaina ny hatraiza ny izay ny fanapahan-kevitra mifanaraka tontolo iainana ireo nihaona eo amin'ny fiainana andavanandro; Mariho fa avo realism dia tsy foana ny zava-dehibe ho fitiliana teorian'ny (Falk and Heckman 2009) . By ny etika tiako holazaina ny fahafahan'ny tsara fikasa mpikaroka ny fitantanana ny etika olana izay mety hitranga.